Featured Blog Posts – October 2012 Archive (38)
Added by sangharsha panta on October 20, 2012 at 11:00am — No Comments
नेपाली सबैले यसको उत्सव मनाउन पाउनुपर्छ तर यस्तो मान्यता राख्दैमा कहाँ पूरा हुन्छ र ? यहाँ कतिले आफ्ना वेदनाहरुका कारणले यसलाई ‘आयो र गयो’ का रुपमा मात्र लिएका…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 19, 2012 at 6:30am — No Comments
रितुहरुको राजा बसन्त पछिको राम्रो समय शरद रितु बाताबरण मनोरम छ । धानका बाला जताजतै झुल्दैछन । घर घरमा भएका बुटीहरु मौलाएका छन । एउटा छुट्टै उमङ्ग छाएकोछ सबैमा । कामका लाति शहर पसेका गाँउ…
Added by Kamal Paudyal on October 18, 2012 at 1:30pm —2Comments
हिजो बुधबारबाट नयाँ दरभाउ तोकिएको छ । खसी मासु व्यवसायीले एकतर्फी रुपमा भाउ निर्धारण गरी लागू हुने जनाएका छन् । नयाँ मूल्यअनुसार बोसोसहितको मासुको भाउ खुद्रा मूल्य ५५० र बोसोरहित मासुको भाउ ६०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 18, 2012 at 8:03am — No Comments
Added by Bishnu B. Khatri on October 17, 2012 at 7:30pm — No Comments
नुहाउँदै गरेकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्ने प्रहरी हबल्दार कारागार चलान
सीमा सुरक्षा कार्यालय आँपटारीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका सहायक हबल्दार रमेशभगत माली र नवलपरासीको गैँडाकोट–२…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 17, 2012 at 8:00am — No Comments
अपराध नियन्त्रणका लागि दोलखामा ज्वाईन्ट र क्रस युनिट प्याट्रोल
दोलखामा ओम अधिकारी प्रहरी नायव उपरिक्षक भएर आए पछि विभिन्न प्रकारका सुरक्षा शैलीको प्रयोग सुरु भएको छ । यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिएइएको छ । अहिले ज्वाईन्ट यूनिट प्याट्रोल र क्रस युनिट प्याट्रोल जस्ता सुरक्षा शैली अपनाइएको छ । दशैंलाई लक्षित गरी दोलखा प्रहरीले सुरु गरेको सुरक्षा रणनीतिका कारण दोलखाको शान्ति सुरक्षा सुदृढ हुदै गएको छ ।
दशै तिहार नजिकिँदै गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने प्रयास गरेको छ । चाड पर्वको बेला अपराधिक गतिविधिमा…
Added by sherbhhadur bhujel on October 16, 2012 at 9:00am — 1 Comment
माछापालनमा नयाँ सोच: गरे के हुँदैन?
रत्ननगर । वर्ष २४ का अमृत खरेल, वर्ष २८ का सागर भट्टराई र वर्ष ३२ का शंकर सुवेदीले चितवनका अनुभवी मत्स्य व्यवसायी अम्बिकाप्रसाद अधिकारीसँग मिलेर माछापालन सुरू गरेका छन् ।
कुमरोज–६ जनकपुर गाउँमा उनीहरुको दस विघामा माछा पोखरी छ ।
‘एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेर माछा पाल्न सुरू गरेका हौँ’ सागर भट्टराईले जानकारी दिए । उनीहरु चार जनाले ५० लाख रुपैयाँ जुटाएका हुन् । बाँकी रकम…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 15, 2012 at 7:00am — No Comments
Added by Indra Dhoj Kshetri on October 12, 2012 at 11:00am — No Comments
नामको मात्रको अनुगमन, उपभोक्ता असन्तुष्ट
भरतपुर । दसैँको चहलपहल सुरू भएसँगै प्रशासन तथा स्थानीय निकायले खाद्य बस्तुको निरीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ । यद्यपी यो अनुगमन प्रभावकारी हुनेमा उनीहरुको कामले भने ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।
बिहीबार भरतपुर नगरपालिकको नेतृत्वमा भएको मासु पसलहरुको अनुगमनले पनि यस्तै देखाएको छ । बिहानी पख खुल्ने मासु पसलहरुको अनुमन टोलीले मध्यान्हपछि मात्र थालेको थियो । अनुगमनका क्रममा टोलीले अधिकांश…
Added by अल्टर कान्छो’ on October 12, 2012 at 7:30am — No Comments
Added by sangharsha panta on October 11, 2012 at 5:30pm — No Comments